၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အင်အားအကြီးဆုံးမိုဘိုင်း (၁၀) ခု၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက် Androidsis
Android လောကတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ AnTuTu ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ GeekBench နှင့်အခြားသူများတို့နှင့်အတူ၎င်းသည်မိုဘိုင်းသည်မည်မျှအစွမ်းထက်မြန်ဆန်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောရည်ညွှန်းချက်နှင့်အထောက်အပံ့အဖြစ်ယူမှတ်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောစံနမူနာတစ်ခုအဖြစ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပေါ်လာသည်။ ဟုတ်တယ်၊
ထုံးစံအတိုင်း, များသောအားဖြင့် AnTuTu သည်လစဉ်အစီရင်ခံစာကိုပြုလုပ်သည် သို့မဟုတ်၊ စျေးကွက်တွင်တစ်လပြီးတစ်လအားအရှိဆုံးစွမ်းအင်သုံးဆိပ်ကမ်းစာရင်းများ၊ ဤအခါသမယတွင်၊ Oppo X ကိုရှာပါမကြာသေးမီကတရုတ်ကုမ္ပဏီမှစတင်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားသောစမတ်ဖုန်းသစ် ဤအချက် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သိသာသောပြောင်းလဲမှုအချို့ရှိသည် ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လအဆင့်. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ဤစာရင်းကိုမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လမှဖြစ်သည့်အတွက် AnTuTu သည်အောက်တိုဘာလတွင်တွေ့ရမည့်လာမည့်လ၏နောက်အဆင့်တွင်၎င်းကိုအလှည့်အပြောင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်အင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းများဖြစ်ကြောင်း AnTuTu Benchmark မှပြောကြားခဲ့သည်။
စာရင်းထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့အတိုင်း \_ t el Xiaomi က Black ကငါးမန်း ၂၉၂,၉၇၇ ရမှတ်နှင့်အတူစားပွဲကိုဆက်တိုက် ဦး ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်Xiaomi ၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသော Oppo Find X အသစ်သည် ၂၈၆,၅၈၉ နှင့်အခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာများထက်သာလွန်ပြီးဒုတိယစင်မြင့်တွင်ကျန်ရှိသည်။ Vivo NEX တတိယနေရာတွင် ၂၈၃,၈၇၇ မှတ်ရရှိခဲ့သည့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာဖြင့်လည်းကောင်း၊ OnePlus6စတုတ္ထအနေအထားအတွက် 282.644 အချက်များနှင့်အတူ။
အခြားရာထူးများအတွက် Smartisan R1 က ၂၇၄,၇၂၉ မှတ်ဖြင့်ပဉ္စမနေရာကိုရရှိပြီး၊ Xiaomi က Mi 8 ရမှတ် ၂၇၂,၅၅၅ ဖြင့်ဆဌမစင်မြင့်တွင်၊ Xiaomi က Mi ရောသမ 2S သတ္တမအရပျ၌ 262.751 မှတ်နှင့်တကွ, Samsung ရဲ့ Galaxy S9 + အthe္ဌမတွင် ၂၆၂,၅၇၉ မှတ်၊ Samsung က Galaxy S262.579 သည်နဝမအကြိမ်တွင် ၂၆၁,၇၈၇ မှတ်၊ Sony Xperia XZ2 နောက်ဆုံးနေရာတွင် 250.293 မှတ်ရှိပြီး y el Nubia အနီရောင်မှော် ထိပ်ဆုံးမှထွက်လာသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ လုံးကို AnTuTu Benchmark အရသိရသည်
Disney Heroes: Battle Mode သည်သင့်အား Disney နှင့် Pixar Heroes များအားလုံးကို RPG တစ်ခုတွင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်